🥇 ▷ Xalliyaan dhibaatooyinka duubista ee kambuyuutarka oo buuxa ee habkan ah ✅
Xalliyaan dhibaatooyinka duubista ee kambuyuutarka oo buuxa ee habkan ah
Haddii aad ka shaqeyneyso tafatirka fiidiyowga ee Camtasia, waxaad u badan tahay inaad rabto inaad duubto shaashad buuxda. In kasta oo aan lagu talinin in la duubo kulamada ciyaarta HD ee buuxa, waxay wali duubi doontaa aasaaska wax kasta oo kale.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhibaato ay isticmaaleyaasha qaar la kulmaan sababtoo ah Camtasia ma duubto shaashad buuxda. Sii wad aqrinta hoose ee xalka.
Waxa la sameeyo haddii Camtasia aysan duubin shaashad buuxda
TALOOYIN KU SAABSAN: Adeegso qalab kale, sida Adobe Premiere
Haddii Camtasia aysan qori karin shaashadda oo dhan, waxaan soo jeedineynaa ha u ogolaado Adobe Premiere inuu qabto shaqada. Iyada oo la adeegsanayo Adobe Premiere, waxaad si fudud u duubi kartaa shaashadda oo dhan ama qayb keliya, ka dibna kaydinta duubista sida faylka MP4 ah.
Waxa kale oo jira nooc tijaabin oo bilaash ah oo lagu soo daray. Haddii aadan horay u adeegsan Adobe Premiere, waxaad bilaabi kartaa tijaabo bilaash ah oo naftaada u arag waxa qalabkan cajiibka ahi sameyn karo.
⇒ Soo dejiso Adobe Premiere
Haddii aad doorbideyso inaad dhibeyso Camtasia, raac tilmaamaha hoosta ku yaal.
Tani waa mushkilad weyn, gaar ahaan Windows 10 halkaasoo cabirku yahay xanuun murugo geliya dadka isticmaala muddo dheer. Si kastaba ha noqotee, waxay ka careysiisaa dadka isticmaala Windows 7th Windows 8 sidoo kale. Qaabeynta ayaa umuuqata inay tahay dhibaatada dadka qaar maadama go’aankeeda u gaarka ah ee shaashadaha balaaran uusan ogoleyn qabashada shaashadda oo dhan.
Waxaa jira dhowr sababood oo tan ah, iyo sida ugu wanaagsan ee lagu bilaabi karo waa iyada oo loo diidey qiyaasta Windows 125%. Astaantan ayaa u oggolaaneysa akhriska fudud iyo caawinta xaaladaha qaarkood. Si kastaba ha noqotee, waxay ku abuurtaa qalad Camtasia, halkaas oo ay ku qabato shaashadda kaliya qayb ahaan ama suugaan ahaan diiwaan gelinta shaashadda 125%.
Waxaan soo jeediney waa in loo beddelo qiyaasta 100% looguna daro Windows 10 adeegsadayaasha. Dadka kale, waxaan soo jeedineynaa kormeerida qaabeynta. Qaar ka mid ah adeegsadayaasha ayaa ka hadlay dhibaatada iyagoo yareynaya qaraarkiisa inta duubista.
Waan ka warqabnaa in tani aysan ahayn xalka, maaddaama ay adag tahay xallin wax laga qaban karo, laakiin taasi waa waxa kaliya ee sida muuqata kuu oggolaanaya inaad qabato shaashadda oo dhan.
Waa tan sida loo baddalo qiyaasta 125% iyo 100% cabirka iyo qaabka dhowr tillaabo fudud:
Midig guji desktop-ka oo fur Dejinta muujinta.
Qiyaasta iyo Naqshadeynta, xulo 100%.
Dib u bilaw PC-gaaga oo mar labaad tijaabi duubista.
Taasi waxay tiri, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa maqaalkan. Ha ka fogayn inaad tigidhkaaga ugu dirto Taageerada Farsamada ee TechSmith, maadaama laga yaabo inay ku siiyaan aragti wanaagsan oo dhibaatada ku saabsan. Sidookale, fadlan noo sheeg haddii xariggu kaa caawiyay inaad dhibaatada ku xalliso qeybta faallada ee hoose.
Su’aalaha Inta badan La Isweydiiyo: Wax dheeraad ah ka baro arrimaha ‘camtasia’
Camtasia ma u fiican tahay tafatirka fiidiyowga?
Camtasia waa mid ka mid ah barnaamijyada tafatirka fiidiyoowga ugu wanaagsan ee suuqa. Muuqaalkaani muuqaalka fiidiyowga hodanka ah wuxuu ku fiican yahay tafatirka tusmada fiidiyowga ee websaydhka.
Filmora miyuu ka fiicnaanayaa Camtasia?
Camtasia waxay leedahay dhibco badan oo ka badan Filmore meelo badan. Tusaale ahaan, ‘Camtasia’ waa mid aad u xasilloon markay timaado duubista shaashadda, taasoo ka dhigaysa aalad aad u wanaagsan abuurista casharrada fiidiyoowga iyo tusmada wax soo saarka.
Miyaad leedahay sumadda loo yaqaan ‘Camtasia’?
Nooca tijaabada ee bilaashka ah ee ‘Camtasia’ ayaa leh sumad-sumeed. Haddii aad rabto inaad ka takhalusto sumadda-calaamadda, waad u cusbooneysiin kartaa nooca ugu sarreeya.
Laga soo bilaabo tifatiraha Xusuusin: Boostan waxaa markii hore la daabacay Janaayo 2019 waana tan iyo markii loo cusbooneysiiyay freshness iyo saxnaanta.